Alshabaab oo soo bandhigay shaqsiyaad ay sheegeen inay la beedsadeen qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho. – Soomaali 24 Media Network
Alshabaab oo soo bandhigay shaqsiyaad ay sheegeen inay la beedsadeen qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho.
Warbaahinta Al Shabaab ayaa baahisay magacyada xubno ay sheegeen inay ku dileen kuna dhaawaceen weerarkii qaraxa ahaa ee shalay ka dhacay Wadada Maka Al Mukarama.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa kordhay weerarada Al Shabaab ay ka fulinayaan magaalada Muqdisho.
Previous Galmudug oo ka hadashay booqashadii wasiir Sabriye iyo kulankii ay la qaateen.
Next Wax ka ogoow sababaha keenay inay kordhaan qaraxyada iyo weerarada ka dhaca Muqdisho.